प्रदुषणले गर्छ के, जोगिने कसरी ? | Hamro Patro
नेपालका विभिन्न सहरको वायु प्रदूषणको स्थिति आँकलन गर्दा खतराको घण्टी बजिसकेको छ । प्रदूषणको असर तत्कालीन र दीर्घकालीन हुन्छ । केही सामान्य स्वास्थ्य समस्या तुरुन्तै देखिए पनि गम्भीर समस्या देखिन समय लाग्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार अबको चारदेखि पाँच वर्षमा अहिलेको प्रदूषणको असर देखिनेछ। यही तरिकाले वायु प्रदूषण बढ्दै गएमा केही वर्षमै वायु प्रदूषणको चरम संकट भोगेका विश्वका केही सहरकै हविगतमा नपुगिएला भन्न सकिन्न ।
अहिले नै भविष्यमा आउन सक्ने खतरालाई मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । काठमाडौँको धुलोले आजित भएका यहाँका बासिन्दाले काठमाडौँलाई ‘धुलोमाडौँ’ भनेर ब्यंग्य गर्न थालिसकेका छन् । हुन पनि घर बाहिर निस्किसक्नु छैन । धुलैधुलो, सास फेर्न पनि सकस पर्ने अवस्था । अहिले काठमाडौँको आकासमा मडारिरहेको धुवाँधुलो वायु प्रदूषणको कुन चरणमा होला भनेर धेरै चिन्तित छन् ।
वायु प्रदूषण कसरी ?
प्रदूषण भनेको हावाको गुणस्तरमा कमी आउनु हो । अर्थात् श्वासप्रश्वास प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले सासभित्र लिने र बाहिर फ्याँक्ने गर्छाैं । यो शरीरका लागि अनिवार्य अक्सिजन परिपूर्ति गर्ने प्रक्रिया हो । तर, हावामा स्वास्थ्यका लागि नभई नहुने अक्सिजन मात्र होइन, धेरै मात्रामा हानी गर्ने तत्वहरु मिसिएका छन् भने त्यसलाई प्रदूषणका रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
घाँटी चिलाएजस्तो हुने, खसखस हुने, औषधि खाँदा कम भएजस्तो हुने तर ठीक नहुने । खकार नआउने तर निकाल्न मन लागिरहने जस्ता समस्या अहिलेको धुलोका कारण निम्तिएका हुन् ।
हावाको गुणस्तर हावामा रहेका हानिकारक कणहरुको मात्रा र साइज अनुसार मापन गरिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठानले वायु प्रदूषण मापनका लागि १० पर माइक्रोमिटर (पिएम) भन्दा सानो र २ दशमलब ५ पर माइक्रोमिटर (पिएम) भन्दा सानो भन्ने मापन बिन्दु तय गरेको छ । हावामा साना कणको संख्या जति धेरै भयो उति यसको गुणस्तर कम ठानिन्छ । साना कणले स्वास्थ्यमा बढी समस्या सिर्जना गर्छन् । हावामा रहने विभिन्न हानिकारक वस्तु तथा रसायनका कणलाई विज्ञानसम्मत वर्गीकरण र व्याख्या गरिन्छ । त्यसअनुसार २ दशमलब ५ पिएमभन्दा साना कणलाई खतरनाक मानिएको हो । किनभने यी फोक्सोको भित्री भाग हुँदै शरीरका अन्य अंगसम्म फैलिन सक्छन् ।
हावामा हुने हानिकारक तत्व
आँखा बिझाउने, आँखा रातो हुने, आँशु आइरहने र सुख्खा हुने समस्या पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा बृद्धि भएको छ ।
खोकी लाग्ने कारण
अघिल्ला वर्षमा भन्दा निमोनिया भएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढेको छ । यसको कारण वायू प्रदूषण पनि हो ।
किन आइरहन्छ खकार ?
घाँटी चिलाउने, खसखस हुने, औषधि खाँदा कम हुने तर निको नहुने, खकार नआउने तर निकाल्न मन लागिरहने जस्ता समस्या अहिलेको धुलोका कारण निम्तिएका हुन् । कतिपयलाई खकार ननिकाल्ने तर निकाल्न खोजिरहने बानी परेको हुन्छ । यो चाहिँ प्रदूषणले निम्त्याएको मानसिक समस्या हो । जसले घाँटीमा केही छ भन्ने महसुस गराइरहेको हुन्छ ।
शरीरको प्रणालीले घाँटीभन्दा तल पुगेका कणलाई खकारका माध्यमबाट निकाल्न खोज्छ । खकार शरीरको रोग प्रतिरोधी प्रणालीमै पर्छ । खकारले बाहिरबाट आएको फोहोरलाई बाहिरै निकाल्ने काम गर्छ । साथै, श्वासप्रश्वासलाई सुख्खा हुनबाट जोगाउँछ पनि । प्रदूषणका कारण धेरै फोहोरका कण भित्र पुग्न थालेपछि यो प्रणाली बढी सक्रिय हुन्छ । अर्थात् खकार धेरै निस्किन थाल्छ । खकार लगातार निस्किरहने प्रक्रियालाई ‘एक्युड ब्रोन्काइटिस’ भनिन्छ । वर्षाैंसम्म यस्तै भइरह्यो भने यो ‘क्रोनिक ब्रोन्काइटिस’मा रुपान्तरित हुन्छ । खकार आइरहने भएकाले श्वासनलीमा स्थायी परिवर्तन आउँछ ।
लगातार फोहोर बाहिर निकाल्नुपर्ने भएपछि खकार निकाल्ने ग्रन्थी ठूलो बन्छ । शरीरका हरेक अंग वा प्रणाली सामान्य रहे मात्र मानिस स्वस्थ रहन्छ । यसरी ग्रन्थी ठूलो भयो र निरन्तर खकार आइरह्यो भने त्यो असजिलो प्रक्रिया हुन जान्छ ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणको सवालमा सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ । धुलोका कारण आउने समस्या एकातिर छँदै छ । समग्र वायु प्रदूषणकै कारण आउने समस्या झन् जटिल बन्दै छ ।
- डा. न्यौपाने काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालकी मेडिसिन विभाग प्रमुख हुन्